तिम्रो कपडा त च्यात्तिएछ नि बुढी ! - मनोरञ्जन - साप्ताहिक
तस्विर : निश्चलको फेसबुकबाट ।
यतिबेला चलचित्र उद्योगमा कुनै चलचित्रको चर्चा छ भने, ‘घामड शेरेको’ छ । चर्चित निर्देशक तथा अभिनेता निश्चल बस्नेत र अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले यो चलचित्रमा साली र भेनाको भुमिकामा काम गरेका छन् । आइतबार बिहान नक्साल नजिकैको एक रेष्टुरामा यो जोडी अन्तरवार्ताका लागी पर्खिरहेको थियो, कान्तिपुरकर्मी रामजी ज्ञवालीलाई । एकछिनमा टुप्लुक्क पुगे, ज्ञवाली । उनीहरु निकै रोचक गफगाफ गरिरहेका थिए, ज्ञवालीले सुनीरहे । कम्तीमा १० मिनेटजति उनीहरुको गफगाफ भयो र अन्र्तवार्ता सुरु भयो । रियल जोडी निश्चल र स्वस्तिमालाई साली र भेनाको भुमिकामा काम गर्दा कस्तो अनुभब भयो ? चलचित्र छायाँकनका बेलामा भएका रमाइला प्रशंगहरुसँगै विभिन्न विषयमा गरिएको कुराकानी केहि दिनमा सार्वजनिक गर्नेछौं । तर, यसपटक ज्ञवालीले अन्तरवार्ताअघि उनीहरुले जे–जे गफ गरिरहेका थिए, उक्त कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
निश्चल : तिम्रो कतिबेला हो डबिङ ?
स्वस्तिमा: डबिङ सुरु हुन थालिसक्यो । एकछिनमा भागिहाल्ने हो !
निश्चल : सकिन्छ आज ?
स्वस्तिमा: सकिन्छ । अन्तिम पार्टको त बाँकी छ नि !
निश्चल : लास्टको भन्न थालेको ५ दिन भैसक्यो ।
स्वस्तिमा : स्वर सुकिराछ नि त मेरो ।
निश्चल : ल ल । खाजा टाइममा खानु नि ।
स्वस्तिमा : खान्छु, एकछिनमा ।
निश्चल : खाने भन्ने । जहिले घर आउँदा भोक लाग्यो, दिनभरी केहि खान पाइनँ भन्ने त होला नि !
स्वस्तिमा : त्यस्तो त भनेकी छैन है । अलि–अलि खाएकी छु तर भोक लागिराछ भन्छु ।
स्वस्तिमा : हजुरको के काम छ आज ?
निश्चल: दिनभर इन्टरभ्यु नै इन्टुभ्यु छ । बोल्या बोल्यै गर्ने आज ।
स्वस्तिमा : ए–ए ।
निश्चल: मेरी बुढी ? (मायाले अंगाल्दै)
स्वस्तिमा : उम भन्स्यो ।
निश्चल : तैले मेरो कहिले तारिफ गर्दिनस् नि ! कहिलेकाहिँ यत्तिकै बस्या बेला तारिफ गर्ने चलन त छैन है ?
स्वस्तिमा : तारिफ त जहिले गरिरहेकी हुन्छु त ।
निश्चल : ह्या... । कहिलेकाहिँ कसैले सोधे मात्रै हो तारिफ गर्ने । कोहि मिडियामा बोल्न परे मात्रै हो, उहाँ यस्तो हुनुहुन्छ उस्तो हुनुहुन्छ भन्दै ।
स्वस्तिमा:हजुरले त त्यहि पनि भनिसिन्न । मैले त इन्टरभ्युमा भएपनि तारिफ गरिरहेकी हुन्छु ।
निश्चल : किन नभन्ने ? मैले कतिपटक भन्छु, मेरी बुढी कति राम्री देखिएको भनिरहन्छु त ।
स्वस्तिमा: तारिफ भनेको राम्री मात्रै भन्ने हुन्छ र ? टेल मि समथिङ अवाउट मि न ।
निश्चल : यो लुगा यस्तो देखियो यसो उसो भनिरहेको हुन्छु । मैले जे भनेपनि नहुने ? जे पायो त्यहिँ है ?
स्वस्तिमा : ऐया..., (निश्चलले चिमोटेपछि) धेरै नजिस्कनु त ! चलचित्र रिलिज हुन लाग्यो, कत्तिको डर लाछ ?
निश्चल : यस्तो कुरा त कहिले गर्दौनौं हामी । कहाँबाट यस्तो कुरा गरेको तैले ?
स्वस्तिमा : आज सोध्न मन लाग्यो नि त ।
निश्चल : डर त फिटिक्कै लाग्या छैन । भोली चलचित्र प्रदर्शन हुने बेला रातभर के–के कुरा खेलिरहन्छ । नत्र अरु दिन त खासै केहि हुन्न मलाई ।
स्वस्तिमा: त्यसो भए यो चलचित्र लाग्ने भन्दा अघिल्लो रात तपाईँलाई बिभिन्न कुरा गरेर भुलाइदिन पर्ने भो ।
निश्चल: भुलाइदेउ झन् राम्रो । अनि सबैभन्दा पहिलो कुरा त चलचित्र प्रदर्शन हुने दिन विहान चलचित्र लाग्ने बेलासम्म झन् मनमा के के कुरा खेल्छ । हलबाट निस्केपछि के भन्ने होलान् मान्छेले ? मन पराउँछन् या पराउँदैनन् के के हुन्छ हुन्छ ।
निश्चल : तँलाई के हुन्छ ?
स्वस्तिमा: मलाई त यस्तो हुन्न ।
निश्चल : हुन त हो, रिलिजको दिन १२–१ बजेसम्म पनि सुतेको देखिएकै छ । हाहाहा...।
स्वस्तिमा: सुत्छु नि, अहिले प्रदर्शनका बेलासम्म दिनरात लागिएकै हुन्छ । प्रदर्शनको दिन सबै अडियन्सको हातमा हुन्छ । बरु, बिहान उठेपछि चलचित्रको बारेमा एकपटक निर्देशकलाई सोध्छु के भैरहेको छ भनेर ।
निश्चल: (एकछिनको मौनतापछि) केहि त भनन बुढी, किन मौन ?
स्वस्तिमा: के भन्ने हो र ?
निश्चल : तिम्रो कपडा त च्यात्तिएछ नि बुढी ?
स्वस्तिमा : भित्रबाट निकालेर बाहिर ल्याउने ठाउँ हो, कहाँ च्यात्तिएको हो र ? डिजाइन हो थाहा छैन ? हिजो मात्रै किन्या हो ।
निश्चल: के थाहा ? केटीको लुगाको डिजाइन च्यात्तिएको हो कि डिजाइन हो पत्तो पाउन सक्दिनँ म त ।
स्वस्तिमा : आफ्नो बरु पाइन्ट च्यात्तिएको छ, हेर्नु छैन ।
निश्चल:पाइन्ट च्यात्तिएको त जसले पनि लगाएर हिड्छ त ।
स्वस्तिमा: आफुले त जे भनेपनि ठिक, नत्र बेठिक ?
निश्चल : मैले ठिक र बेठिकको कुरै गरेको छैन । च्यात्तिएको पाइन्ट त जसले पनि लगाएको हुन्छ ।
स्वस्तिमा : धेरैले लगाएको हुन्छ भनेपछि ठिक भन्ने हुन्छ र ?
निश्चल:ए भगवान म कहाँ जाउँ ? मैले जेनरल कुरा मात्रै गरेको त यसले आरोप नै लगाई ।
स्वस्तिमा : भिडले जे भन्छ त्यहिँ ठिक हो भन्ने हुन्न है ।
निश्चल: मैले के कुरा गदैथिएँ, कुरा कहाँ पुराएर जोडेको हरे !
स्वस्तिमा: कुरा नै त्यहिँ हो । मैले भनेको कुरा त ठिक हो नि ।
निश्चल : यो डिजाइन हो कि, च्यात्तिएको हो भन्ने थाहा पाएको भए मैले कुरै गर्ने थिएन । यति डाइलग दिन्छ भन्ने थाहा पाएको भए यो कुरै गर्दिन थे ।
स्वस्तिमा : हैन, हजुरले यस्तो भनिस्यो । केटीको कुरा च्यात्तिएको हो कि डिजाइन हो पत्तो पाउँदिन भनेको होइन ?
निश्चल : केटीको मतलब मेरी बुढिको भन्या हो । मैले को केटिको तिम्रो यहाँ च्यातिएको छ भन्दै हिँडेको छु ?
स्वस्तिमा : हजुरले भनिस्येछ त । यो केटीको त यहाँ च्यात्तिएको थियो भन्दै कतिपटक सुनाइस्येछ त ।
निश्चल : कहिले भनेँ ? हावा कुरा गर्छे । यत्तिकै फसाउँछे मलाई ।
निश्चल : तिम्रो डबिङ कति टाइममा सकिन्छ ?
स्वस्तिमा : एक घण्टा त लाग्छ ।
स्वस्तिमा : घर कतिबेला जाने ?
निश्चल : मैले मेरो काम सकाउँछु अनि जान्छु, तिमी काम सकाएर आउ ।
स्वस्तिमा : ल ल ।
निश्चल : डबिङ पछि ?
स्वस्तिमा : केहि काम पनी छ, इन्टरभ्यु छन् । त्यो सकाएर आउँछु । घर आउँदा ९ बज्छ । हजुर आज गेम खेल्न पाइसिन्छ मज्जाले आज ।
निश्चल : भनेपछी धेरै समयपछि मज्जाले गेम खेल्न पाइने भयो । धन्यवाद्, त्यस्तो सुविधा दिएकोमा ।
स्वस्तिमा : हाहा.., ल टाइममा जानु, म काम सकाएर छिट्टै आउँछु । सि यु डियर ।
महिनावारीमा प्याड कि रुमाल ?